Soosaarayaasha Chromium Waxay Leedahay Liis Madoow Nouveau | Laga soo bilaabo Linux
Maalmo ka hor horumariyeyaasha mas'uulka ka ah mashruuca Chromium waxay go'aansadeen inay wax ka bedel ku sameeyaan liistadooda madow ee darawallada, Tani waxay sabab u tahay dhibaatooyinka matalaadda la arkay inta lagu gudajiray shaqaynta codsiyada WebGL ee ay la yimaadeen kuwa horumariya waxay liiska madow geliyeen darawalka bilaashka ah ee loo yaqaan 'Nouveau driver'.
Iyaga oo ay ku curyaamiyeen adeegsiga hawlgal kasta oo dardargeliya howlaha garaafka ee dhinaca GPU-da.
Joojinta taageerada darawalnimada bilaashka ah cusub gudaha Chromium waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka isticmaala Ubuntu qaybinta kaas oo darawalkan loo isticmaalo si caadi ah, oo ay ku jiraan nooca LTS ee Ubuntu 18.04.
Nouveau waa mashruuc bilaash ah oo bilaash ah barnaamij softiweer ah oo ujeedkiisu yahay in loo abuuro darawal qalab bilaash ah kaararka Nvidia kaararka, iyadoo la adeegsanayo injineernimada wadayaasha lahaanshaha GNU / Linux iyo qalabka laga hadlayo.
Mashruucan 'X.Org Foundation' iyo mashruuca xoriyada 'freeesktop.org' wuxuu asal ahaan ku saleysnaa dareewalka "nv" ee obfuscated ee horey u sii daayay nvidia
1 Ku saabsan dhibaatada
1.1 Xalalka suurtagalka ah
Ku saabsan dhibaatada
Sida laga soo xigtay horumarinta Chromium, ma haysatid ilo aad ku tijaabiso dhammaan iskudhafka kontoroolka GPU-yada iyo qaybinta, iyo sidoo kale in la ogaado oo la saxo khaladaadka darawalada.
Natiijo ahaan, xakamaynta ayaa lagu darayaa liiska madow, sida xasilloonida iyo amniga biraawsarka loo hor mariyo iyo taageerada dardargelinta ee dhinaca GPU waxay la xiriirtaa howlaha labaad.
Isla mar ahaantaana, Soosaarayaasha Chromium waxay diyaar u yihiin inay hagaajiyaan liiska madow ee xayiraadda xulashada, haddii soo saareyaasha wadaha ay bixiyaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan noocyada iyo aaladaha ay dhibaatooyinku ka muuqdaan ama shaqada deggan lagu xaqiijiyo.
Soosaarayaasha Nouveau waxay xaqiijiyeen jiritaanka cilladaha inta lagu gudajiray fulinta weelka tijaabada WebGL CTS, laakiin waxay u kuurgaleen in cilladaha badankood ay ka muuqdaan imtixaannada isku dhafka ah iyo xaaladaha qaarkood oo aan caadi ahayn.
Soosaarayaasha Nouveau wax dhibaato ah oo shaqsiyadeed ah ma lahan isticmaalka darawalkaan iyadoo lala kaashanayo Chromium oo waxay u arkeen inaysan habboonayn in liiska madow lagu daro darawalka.
Marka lagu daro tijaabooyinka 'WebGL CTS synthetic', waxay awoodi kari waayeen inay ku celiyaan muujinta arrimaha halista ah, marka laga reebo cayayaanka muddada dheer la yaqaan ee la arkay oo keliya markii la isticmaalayo noocyo gaboobay oo Mes ah.
Sida laga soo xigtay horumariyeyaasha, xaaladaha intooda badan, arrimaha xasilloonida kuma soo baxaan isticmaalka noocyada hadda ee Mesa.
Xalalka suurtagalka ah
Sikastaba, go'aanka u beddelashada kontorool kale ama joojinta ceejinta waa inuu sameeyaa isticmaalaha, maahan soo saaraha biraawsarka, gaar ahaan maadaama darawalku lagu qiimeeyay inuu yahay mid la taageeri karo oo loogu talagalay nooca Ubuntu LTS.
Mid ka mid ah waddooyinka looga bixi karo xaaladda hadda jirta, Waxaa la soo jeediyay in loo beddelo ku rakibidda qiime aan kala sooc lahayn garoonka Nouveau ee aagga GL_VENDOR si looga fogaado xannibaadda
Jawaab ahaan, isticmaaleyaasha qaar waxay soo jeediyeen in xoogaa cillad-baaris ah lagu sameeyo tijaabooyinka WebGL CTS.
Adigoo si faahfaahsan u falanqeynaya warbixinnada shilalka isticmaalaha, sameynta tijaabooyinka shilalka ee khaladaadka, iyo kaqeybgal adeegsadayaasha Chromium si loo ogaado arrimaha xasilloonida
Soo-saareyaasha Nouveau waxay muujiyeen in, dabcan, qorshaha noocan oo kale ahi uu hagaajin doono tayada xakamaynta, laakiin fulintiisu waxay u baahan tahay ilo aad u tiro badan, oo mashruucu aanu hadda lahayn.
Marka shaqadu wali waxay diiradda saareysaa baabi'inta arrimaha la yaqaan ee la soo saari karo sida burburka inta lagu jiro xajmiga ugu sarreeya.
Halkii faallooyinka guud ee xasilloonida hooseeya, aan lagu xaqiijin warbixinno gaar ah oo soo noqnoqda oo leh macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan deegaanka dhibaatadu ka dhacdo.
Kuwa doonaya inay si buuxda u isticmaalaan Chromium 71 oo leh kaararka fiidiyowga ee NVIDIA.
Waqtigaan waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho koontaroole lahaansho ama aad ku bilowdo biraawsarka webka xulashada "–ignore-gpu-blacklist" oo aad qatar ugu jirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Soosaarayaasha Chromium waxay ku darsadeen Nouveau liiska madow
Nasiib darro darawalka nouveau wuxuu ka qiimo yar yahay inuu ku siiyo waqti aad ku rakibto darawalka lahaanshaha.
Nasiib wanaagse, dadka isticmaala Nvidia waxay taageero fiican ka haystaan ​​wadayaasha lahaanshaha, haddii tani ku dhacday AMD waxay noqon kartaa hecatomb sababtoo ah halkaas milkiilayaashu waxay u shaqeeyaan kaliya dadka laga tirada badan yahay, inta soo hartay waa inay kuwa xorta ah u adeegsadaan waajibaad.
Dhinaca kale, tani waxay muujineysaa in Linus Torvalds uu gabi ahaanba sax yahay markii wareysiyadii la soo dhaafay uu ku sheegay dhibaatada atomiska ee halista ah ee ku jirta GNU / Linux, waxaa jira cilado aad u tiro badan, oo kala duwan oo gaar u ah qeybinta badan oo ay ku noqotay mid aad ugu culus soo saare. taageero ku soo bandhig halkan. Dhibanayaal aan allifnay.
Ku jawaab Andreale Dicam
Tilix 1.8.7, oo ah nooc cusub oo ka mid ah emulator-ka terminal-ka ah Linux caan ah